မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသော Internet Connection များအကြောင်း!!! - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသော Internet Connection များအကြောင်း!!!
17-01-2010, 07:34 PM
ပြန်စာ - မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသေ&#
ကိုbongeရေ- အကိုပြောထားတဲ့ Fiber line အကြောင်းကို တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ပိုးကောင်လေး ဒီနေ့ မော်ဒန်ဂျာနယ်ဖတ်လိုက်တော့ မငြိမ်းငြိမ်းပြည့် က Fiber Optic Cable နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကို တာဝန်ယူပြီးလုပ်ဆောင်ပေးမယ့် Company ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ အသုံးပြုမယ်ပစ္စည်းတွေ၊ ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို မေးမြန်းထားတဲ့ဟာလေးတွေလို့ ပြန်ရေးထားတယ်။ ဗဟုသုတတော့ရမှာပါ။ ပြီးတော့ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲဆိုတာလဲသိခွင့်ရမှာပါ။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ အချို့အကြောင်းအရာတွေကို ပိုးကောင်လေးအင်တာနက်ကနေပြန်ရှာပြီးတော့ အတိုကောက်တွေ၊ အခြားမသိသေးတဲ့စကားလုံးတွေ၊ ပစ္စည်းတွေရဲ့လင့်ကိုလဲ ဖော်ပြ ပေးထားပါတယ်။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ဂျာနယ်ထဲကနေ အဆင်ပြေမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့စကားလုံးအကျယ်တွေလဲ ပြန်ရှင်းထားပါ တယ်။
ဆက်သွယ်ရေးကြိုးတစ်ချောင်းတည်းနဲ့မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်၊ ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်နဲ့တယ်လီဖုန်းစတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုသုံးခုပေးနိုင်တဲ့ ဂျီပွန်း (GPON) စနစ်သစ်ကို ရတနာပုံတယ်လီပို့ကုမ္ပဏီလီမိတက်ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ Fortune International Company အပါအ၀င် Company ၅ခုလောက်ကနေပြီးတော့ ၂၀၁၀၊ ဧပြီလမှာ စတင်ပြီးတော့ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းတပ်ဆင်ပေးပါတော့မယ်။
GPON ဆိုတာကတော့ (Gigabit Passive Optical Network) ကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီး Passive ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗိုက်ဘာကြိုးတွေပေါ်မှာ ပါဝါလွှတ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ အခုသုံးနေတဲ့တယ်လီဖုန်းစနစ်တွေမှာ ဆိုရင် ဖုန်းကြိုးတွေပေါ်မှာ ဒီဗီဗို့ပါဝါ လွှတ်ပေးထားရတာဖြစ်လို့ Active လို့ခေါ်ပါတယ်။
MSP (Main Service Provider) ကတော့ ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကုမ္ပဏီပါ။ အဲဒီကနေမှ Fortune စသည့်ကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ခံပြန် လုပ်ပေးရတာပါ။ ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တော့ Company ၅ခုကနေပြီးတော့ ဇုန်ကြီး၅ဇုန်ခွဲပြီးတော့ ၀န်ဆောင်မှုပေးမှာပါ။ သတ်မှတ်ထားတာကတော့ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ Company တစ်ခုကနေပြီးတော့ အနည်ဆုံးလိုင်းတစ်သောင်းတပ်ဆင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
GPON စနစ်မှာဆိုရင်တော့ 20km (၂၀ကီလိုမီတာ)အထိ ဘာပစ္စည်းမှထပ်ထည့်စရာမလိုဘဲ Fibre Connection ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေမှာ အဲသည်လောက်ဝေးရင်ကြားမှာ Booster လိုမျိုးတွေခံပေးရပါတယ်။ အခု Fiber Connection မှာဆိုရင်တော့ ဘာမှခံပေးစရာမလိုပါဘူး။ Data တွေက်ုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက် Bandwidth ကတော့ 2.5Gbps အထိကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက် Upload; Download ကတော့အရမ်းမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ GPON ရဲ့ OLT (Optical Line Terminal) က high density ဖြစ်လို့ shelf တစ်ခုမှာသုံးစွဲသူ ၃၀၇၂ ဦး၊ အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ OLT ဆိုတာကို သေချာမပြောထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် GPON OLT (Gigabit Passive Optical Network; Optical Line Terminal) အကြောင်းကို အောက်ကလင့်တွေမှာလေ့လာ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (အောက်ကလင့်တွေမှာ OLT အကြောင်း၊ OLT ကို Testing လုပ်တဲ့ PDF၊ ပုံတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေလဲ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ )
http://ecnasiamag.com/documents/gpon_white_ppr-1.pdf (GPON အကြောင်း)
GPON OLT ကိုထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ITU-T Standard (International Telecommunication Union–Telecommunication Standardization) နိုင်ငံတကာတယ်လီကွန်ယူနီရဲ့စံနဲ့ထုတ်တဲ့အတွက် ဘယ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မဆိုတွဲအသုံးပြုရပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်မှာဆိုရင် 20Mbps အထက်၊ အင်တာနက်အတွက် 50Mbps အထက်၊ တယ်လီဖုန်းစနစ်အတွက် တည်ငြိမ်တဲ့ bandwidth ပေးနိုင်ပါတယ်။ ADSL Network Connection လိုင်းနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ တပ်ဆင်ဖို့နေရာအနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါတယ်။ Cable ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းကနေ အသုံးပြုသူ ၆၄ယောက်ခွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုးဆခန့်သက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်စရိတ်သုံးဆလောက်သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် ၁၈ဆလောက် သက်သာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက် တွေနဲ့ ADSL Network Connection နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြသွားပါတယ်။ ADSL Connection လိုင်းထပ်စာရင် Connection Speed ဟာ နှစ်ဆ၊ သုံးဆလောက်ပိုမြန်နိုင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ Internet line တစ်ခုတည်းကိုပဲချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလလောက် ကျရင်တော့ တကယ်ကိုမြန်နှုန်းမြင့်တဲ့အင်တာနက်ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ရင်တော့ Internet Connection လိုင်းအပြင်၊ အခြား ၂မျိုး (ရုပ်သံ) ကိုသုံးစွဲနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Fiber Optic Connection မှာ GPON နဲ့နည်းတူ EPON ဆိုတာလဲရှိပါတယ်။ EPON ဆိုတာ (Ethernet Passive Optical Network) ဖြစ်ပါတယ်။
EPON OLT အကြောင်းနှင့် EPON
EPON ကို ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အသုံးပြုနေမှာအသုံးပြုနေတာ ကြာနေပါပြီ။ GPON ကတော့ GEM Frames (GPON Encapsulation Method (GEM)) ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ EPON ကတော့ Ethernet Frames ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ GPON နဲ့ EPON ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ GPON က 2.5Gbps ရှိပြီးထိရောက်မှု ၉၂ရာခိုင်းနှုန်းနဲ့လက်တွေ့မှာ 2.3Gbps သုံးနိုင်ပါတယ်။ EPON က 1.25Gbps ရှိပြီးထိရောက်မှု ၇၂ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လက်တွေ့မှာ 900Mbps သာသုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအသုံး ပြုမည့်ဟာကတော့ GPON ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ GPON စနစ်မှာလဲ Copper; Ethernet; Fiber လိုင်းသုံးလိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Fiber နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ GPON System ကအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခုသုံးနေတဲ့ Copper line ပေါ်တင် လိုက်ရင် Quality ကျသွားနိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်တိုင်ရာရောက် ဖိုက်ဘာ တပ်ဆင်ပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Fiber To The Home (F.T.T.H)
အပေါ်က Fiber Connection အကြောင်းကို မော်ဒန်ဂျာနယ်ထဲက မငြိမ်းငြိမ်းပြည့်နဲ့ Fortune Company ကတာဝန်ရှိသူတွေပြောဆိုထားကနေ ကောက်နုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အချက်အလက်တွေကိုအင်တာ နက်ကရှာထားဖြစ်ပါတယ်။ Fiber Connection အကြောင်းစာအုပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကိုတစ်ယောက် ဆီကရထားတာရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေရင်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ခင်မေခ, ညီနေမင်း, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, bonge, KznT, minlatt, minthike, naung252, soehtetpaing, tu tu, yawnathan
22-01-2010, 02:37 PM
အောက်မှာတော့ Fiber Optic Internet Connection အကြောင်းလေ့လာလို့ရအောင်စာအုပ်လေး တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေခ, ညီနေမင်း, ဝင်းအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်လွင်ဦး, AZM, bonge, kyaukphyu, KznT, minthike, yawnathan
30-10-2010, 08:46 AM
ပြန်စာ - မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသေ&a
31-10-2010, 10:44 PM
ကိုပိုးကောင်လေးမဟုတ်ပါ။ စကားပြောရင် ဗျာ။ ဗျာ လို့ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိနေလို့ပါ။
21-11-2010, 10:39 AM
တည်နေရာ: Jing Hong, China.
အောက်ကလင့်လေးမှာတော့ Dial-Up Connection အကြောင်းလေး ပုံနဲ့စာတွဲလျက်ပါ။
အောက်ကလင့်မှာတော့ iPSTAR Connection အကြောင်း
အောက်ကလင့်မှာတော့ Wireless Broadband Local Loop Connection အကြောင်း
အောက်ကလင့်မှာတော့ ADSL Connection အကြောင်း အားလုံးတဆက်တည်းပါ။
အောက်ကလင့်မှာတော့ WiMax Connection အကြောင်းလေးပါ။
အောက်ကလင့်မှာတော့ Wi-Fi Connection အကြောင်းလေးပါ။
အဲဒါတွေက အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် mediafire နဲ့ပြန်တင်ပေးပါခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ tinhlain အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by tinhlain
အများအကျိုးဆောင် ကိုပိုးကောင် ပျောက်နေတယ်ဗျ။ သူအစား ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Wireless Broadband Local Loop Connection
အပေါ်က ဖိုင်တွေ အားလုံးကို တစ်စုတည်း လိုချင်တယ်ဆိုရင် ...
Credit To ပိုးကောင်လေး
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, ဂတုံးလေး, ရန်မျိုးအောင်, ဝင်းကျော်ဦး, ကော်ဖီ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, hellboy, kyaukphyu, KznT, minthike, soehtetpaing, tu tu
25-11-2010, 11:58 AM
Analog Dial-up modem နဲ့ DSL modem တွေ အသုံးပြု၍ အင်တာနက် သုံးတော့မယ်ဆိုရင် မိမိ ရှိထားတဲ့ ဖုန်းလိုင်းပေါ် မူတည်သေးလား ခင်ဗျ။ ကျွန်တော် အဲဒီ ၂ ခုကို မရှင်းလင်းလို့ပါ၊ အဲဒီ Analog Dial-up modem နဲ့ DSL modem တွေ အသုံးပြု၍ အင်တာနက် သုံးရင် Speed နဲ့ Cost အပြင် ဘာကွာခြားချက်တွေ ရှိသေးလဲ ခင်ဗျ။Digital Phone Line၊ Modem၊Access Kit ရှိရင် Dial-up သုံးလို့ရတယ်ဆို ကျွန်တော့တို့ ရွှေဘို တို့ မုံရွာတို့ဘက်က ရွာတွေမှာ 071 - နဲ့ စတဲ့ ဖုန်းတွေ မှာရော အဲ ဒီ Dial-up connection သုံးလို့ရလား၊
Last edited by ကော်ဖီ; 25-11-2010 at 01:18 PM..
ကိုကော်ဖီရေ . . .
ဒီနေ့တော့အချိန်သိပ်မရသေးလို့ အနည်းငယ်ပဲပြောထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ မနက်ဖန်မှာတော့ ပိုးကောင်လေးသိသ လောက်ကို ပြန်ပြောထားပေးပါမယ်။ Modem တွေအားလုံးဟာ digital to analog/ analog to digital တွေကို ပြောင်းလဲပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ Modem တွေမှာဆိုရင် External Modem; Internal Modem; DSL Modem; Cable Modem တွေဆိုပြီးတော့ရှိကြတယ်ခင်ဗျ။ (နောက်နေ့အသေးစိတ်သိသလောက်ပြန်ပြောထားပါ့မယ်။)
Dial Up Connection ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင် မည့်သည့်နေရာဒေသတွင်မဆို Digital Phone Line ရှိတယ် ဆိုတာနဲ့ Computer; Modem; ISP (Internet Service Provider ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် Access kit) တို့ရှိ တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(p.s / ဦးဦးငယ်ရေ .... ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ busy sign လား (+) sign လားမသိဘူး သားလေးပြနေလို့ပါ။)
ပိုးကောင်လေး . . .။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, ကော်ဖီ, bonge, hellboy, KznT, tu tu
မအားလပ်တဲ့ ကြားထဲက ပြန်ဖြေကြာပေးတာ ကျေးဇူးပါ၊ ကျွန်တော် DSL modem ကို သုံးပြီး အင်တာနက်သုံးတာ နှင့် Dial-up modem သုံးပြီး အင်တာနက် သုံးတာ ကို မရှင်းလင်းဖြစ်နေလို့ပါ၊ စာတွေ့တော့ ဖတ်ဖူးတယ်၊ လက်တွေ့ မသုံးဘူးလို့ နားမလည် ဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ ကျွန်တော် သိထားတာက Dial-up နည်းနဲ့ သုံးရင် PSTN ကို သုံးရတယ်၊ အဲဒီနည်းက Circuit-switched communication links တဲ့ ၊ သူက Private WAN connection နည်းလမ်းတွေထဲမှာ ပါတယ်တဲ့။အဲ DSL ကတော့ Broadband Services ထဲမှာ ပါတယ်တဲ့၊ သူက Public WAN connection နည်းလမ်းတွေထဲမှာ ပါတယ်/ကျွန်တော် သိချင်တာ ဒီဖုန်းလိုင်းကိုပဲ အသုံးပြုတာ ၊ ဘာတွေ ကွာခြားချက် ရှိလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ မရှင်း မရှင်း ဖြစ်နေလို့ အကူအညီ တောင်းတာပါ။
Dial-up Connection အတွက် Modem ဆိုရင်တော့ … မိမိတို့ကွန်ပြူတာကနေပြီးတော့ Digital Data တွေကို analog data(Voice Data) တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ ဖုန်းလိုင်းကနေတဆင့် အခြားတစ်ဖက်ကို ရောက်သွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာကို Modem လို့ခေါ်တာပါ။ Dial up Modem တွေမှာ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့စတင်လုပ်ဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ (Computer; phone line ကနေတဆင့် modem ကိုချိတ်ဆက်တာပါ။) Modem Speaker ကနေပြီးတော့သူ့စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း အသံပြုတတ်ပါတယ်။ (ဘယ်လိုအသံမျိုးလဲဆိုတာတော့ ကျွီကျွီ. . . (သိပ်တော့စာလုံးပေါင်းမရေးတတ်လို့။ ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်ကျရင် ထွက်တဲ့အသံနဲ့တော့နည်းနည်းကွာတယ်ဗျာ။) အဲဒီအသံလေးကြားရမှာပါ။) အဲဒီအသံလေးတွေကြားရမှသာလျှင် မိမိတို့ရဲ့ Modem ကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြတာပါ။ အဲဒီအသံတွေကြားနေရပြီဆိုရင်တော့ မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်းက တဆင့်အခြားတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ Modem ဆီကိုရောက်သွားရင်လဲ အစောက Modem ကနေအသံကြားသလို အခုModem ဆီမှာလဲ အသံတွေပြန်မြည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလိုကြားရတာကတော့ Analog data တွေကို Digital Data တွေဖြစ်အောင် ပြန်ပြောင်းပေး နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Digital data တွေပြန်လာမှသာလျှင် မိမိတို့ရဲ့ Computer Screen မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dial up Connection အတွက် Analog Modem တွေရဲ့ Data speed ပို့လွှတ်နှုန်းကိုတော့ bits per second (bps) နဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ data တွေကိုပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် Standard Modem တစ်ခုရဲ့အမြင့်ဆုံး Data Connection Speed ဟာဆိုရင်တော့ 56Kbps (56,000bps) အမြန်နှုန်းနဲ့ဒေတာတွေကိုပို့လွှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ (အဲဒါကြောင့် Dialup connetion သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Computer နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် Modem အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် External modem or Internal modem ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ Dial up Connection အကြောင်းမှာလဲရေးထားသေးတာရှိတော့ အဲဒီကနေပြီးတော့လဲဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျာ။)
Analog Modem အကြောင်းသိချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်တွေမှာလေ့လာကြည့်ပါအုံးခင်ဗျာ။
http://www.myhome.org/pg/modem.htm (ဒီလင့်မှာလဲဗဟုသုတများစွာရနိုင်ပါတယ်။ Analog modem အကြောင်းပါ။)
Broadband Device (DSL Modem) …
DSL (Digital Subscriber Line) Modem တွေကိုတော့ Broadband Internet Connection တွေမှာဆိုရင်အသုံးပြုပါတယ်။ Broadband Internet Connection တွေမှာဆိုရင် DSL Modem နဲ့ Cable Modem ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ Broadband Connection အတွက်သုံးတာဖြစ်လို့ Broadband ရဲ့သဘောတရားအတိုင်း high speed connection and high traffic internet connection ကို DSL modem ကနေတဆင့်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်Dial Up (Analog Modem) နဲ့ Broadband (DSL modem) တွေရဲ့ကွာခြားချက်ဆိုရင်တော့ Dial up Connection တွေဟာ ပိုက်ဆံကုန်ကျမှုနည်းပါတယ်။ DSL modem သုံး broadband connection တွေမှာဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံကုန်ကျမှုစရိတ်အရမ်းကိုမြင့်မားပါတယ်။ Dial up Connection သုံး Analog modem တွေဟာ ဆိုရင် Internet ကိုချိတ်ဆက်တော့မည့်အချိန်တိုင်း ISP ကိုလှမ်းပြီးတော့ modem ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသာလျှင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Internet သုံးတဲ့အချိန်ဆိုရင် ဖုန်းကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Broadband connection မှာသုံးတဲ့ modem device တွေဟာ standard modem လိုမျိုး (internet connection ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် signal တွေထုတ်လွှတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် Digital ကနေ analog၊ analog ကနေ digital သွားရဲ့တဲ့ Signal မျိုးပါ။)မဟုတ်ပါဘူး။ DSL လို့ခေါ်တဲ့ Digital Subscriber line တွေဟာဆိုရင် Signal တွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအားလုံးဟာ end to end digital connection တွေအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကွာခြားချက်နောက်တစ်ခုကတော့ . . . Connection speed ဟာဆိုရင် အရမ်းကိုကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။
အောက်ကလင့်တွေမှာတော့ DSL modem အကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။
နောက်ထပ်အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ကလင့်လေးတွေမှာ ပိုးကောင်လေးရှင်းထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ တချက်ပြန်ဖတ်ကြည့် ပေးပါခင်ဗျာ။
Dial Up Connection (Standard modem) အတွက်ဆိုရင် Internet လမ်းကြောင်းသွားပုံ….
PC (User) >>>> Modem >>> ISP >>> Internet ကိုချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Broadband device အတွက် DSL Modem အသုံးပြုပြီ Internet လမ်းကြောင်းသွားပုံက…..
PC(User) >>> DSL modem >>> Internet ကိုချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(p.s… ပုံလေးတွေနဲ့မဖော်ပြပေးနိုင်တာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အလုပ်နည်းနည်းများတာကော၊ ခရီးထွက်စရာလေးတွေလဲ ရှိသေးလို့ အလွယ်နည်းနဲ့အသေးစိတ်ပုံလေးတွေမဆွဲပြနိုင်တာတောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အားတာနဲ့ပုံလေးတွေလာပြန်ဖြည့်ပေးပါ့မယ်။ စာလုံးပေါင်းတွေလဲပြန်မစစ်ထားမိဘူး။ အမှားပါရင်လဲ သည်းခံပြီးတော့ဖတ်ပေးကြပါ။)
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ရန်, ကော်ဖီ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, james249, minthike, tu tu
26-11-2010, 02:34 PM
အထက်က လမ်းကြောင်း ၂ ခုကို ယှဉ်ပြမှ ရှင်းသွားတော့တယ်။ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ISDN နဲ့ PSTN နည်းနဲ့ သုံးတဲ့ network ရှိလားဗျ၊ Broadband နဲ့ leased lines အကြောင်းတော့ ကောင်းကောင်း သိတယ်။ISDN နဲ့ PSTN service အကြောင်းမသိလို့ပါ။ သိရင် နဲနဲ ရှင်းပြပါဦး။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကော်ဖီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-11-2010, 07:27 PM
အကိုသိချင်တဲ့ PSTN နဲ့ ISDN အကြောင်းကို (မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့အခြေအနေကို) အွန်လိုင်းမှာ ပိုးကောင်လေး ရှာလို့ရသမျှတော့တင်ထားပေးတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။ အောက်ကလင့်တွေမှာတချက်လေ့လာကြည့် လိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ။ တိုက်ရိုက်လင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်များအချိန်ရရင် ပိုးကောင်လေး သိသလောက်ပြန်ရှယ်ပေးထားပါ့မယ်။ အကိုကော်ဖီလဲအားလုံးအဆင်ပြေ ပါစေခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ကော်ဖီ, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, kyaukphyu, KznT
13-01-2011, 02:58 AM
အကိုရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသော Internet Connection များအကြောင်း!!! က အင်မတန်ကို ဗဟုသုတရပါတယ်။ ပြန်လည်ဝေမျှချင်ပါတယ်အကို။ကျတော့်ရဲ့ ဆိုဒ်ကလေးမှာ ပြန်လည်ဝေမျှ ဖော်ပြခွင့်ပြူပါခင်ဗျာ။
Find More Posts by အေကေတီ
ပို့စ် 19 ခုအတွက် 78 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ADSL နဲ့ WiMax တပ်ဆင်ခြင်း ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိပ် နှစ်စဉ်ကြေး လစဉ်ကြေး ပစည်းတန်ဘိုး conncetion speed တို့ကို နှိုင်းယှဉ် ပြပေးပါ။
Find More Posts by jamacaapril
ကို/ မ jamacaapril ရေ...
ADSL နဲ့ WiMax တပ်ဆင်ခြင်း ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိပ် နှစ်စဉ်ကြေး လစဉ်ကြေး
ADSL အတွက်လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးနှင့်ကနဦးတပ်ဆင်ခများ
WiMax Connection တပ်ဆင်ခနှင့် Planများအကြောင်းသိကောင်းစရာ
အပေါ်ကလင့်နှစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ADSL and WiMax Connection လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးတွေကို ယှဉ်ကြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ်..။ Connection ကအစဘယ်လောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။သီးသန့်ကြီး မဖော်ပြတော့တာကို နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ..။
မောင်ပေါ်ဦး, azp09, bagothar85, bonge, g00gle, nyi.nyi, tu tu
MC Will phone လိုင်းကနေ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်လို.ရပြီလားဗျ ၇ပြီဆိုရင်လည်း ချိတ်ဆက်နည်းလေးကို အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်ဗျ
phoe nyi ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by phoe nyi
MC Will phone လိုင်းကနေ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်လို့ရနေပါ ပြီ အကို သူက ချိန်ဆက်နည်းကတော့အလွယ်လေးပါ ကွန်ပျူတာနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သူဆီကထွက်လာတဲ့ နက်ဝက်ကြိုးကို ကွန်ပျူတာ မှာ ထိုးပြီးတော့ သုံးရုံပါပဲအကို အထိုင်ဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဖုန်းဖြစ်ဖို့လို့ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ အပြင်ဖုန်းဆိုင် (အင်တာနက်ဆားဗစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ )ဖုန်းဆိုင်တွေမှာလဲ ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် သူတို့ ဆိုင်တွေက လည်းချိတ်ဆက်နည်းနဲ့အသုံဲးပြုနည်းကို သင်ပြပေးပါတယ်။ ၅ မိနစ်လောက်ပဲသင်ရပါတယ်။ အောက်ကလင့်တွေကိုလဲလေ့လာပေးပါဦး အဆင်ပြေပါစေ.............
အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် လျှောက်ထားလို့ရမယ်မှုလနေရာနဲ့ ရနိုင်မယ့် စပိတွေ လစဉ်ကြေး ကတ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြထားပါတယ်။
McWill Internet (ပိုးကောင်လေး ပြောပြထားပါတာပါ)
ဒီ E-book လေးကိုလဲဖတ်စေချင်ပါတယ်။
မြန်အောင်သား, azp09, bagothar85, htun30
IP Star installation guide လေးရှိရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ... အဆင့်အဆင့်လုပ်ဆောင်ပုံလေး
Originally Posted by aung.123a
မတွေဖြစ်လို့ ပါကြာနေပြီဆိုတော့ လည်း အခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ....
iPSTAR UT Installation Video 0001
Full Speed - Internet Broadband connection v2.1 Ye Naung Applications 46 24-11-2011 02:17 PM
Windows XP7Pro SP3 Ultimate ASSASSIN Edition v3.0 Fully For Gamers Moe Lay Windows XP006-07-2009 10:00 AM